FBA LCL Negungwa - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva kuti chii chinonzi FBA LCL?
Muchokwadi, LCL imhaka yekuti nhumbi dzevatakuri vakasiyana dzakaungana pamwechete mumudziyo, saka inonzi LCL. Kazhinji, anotakura kana mumiririri anoita basa rekurongedza nekurongedza zvinoenderana nemasikirwo nenzvimbo yezvinhu mushure mekugamuchira huwandu hwezvinhu zvakatumirwa naanotakura pasina mudziyo wakazara wezvinhu zvidiki. Unganidza zvinhu kunzvimbo imwechete kuenda mune imwe huwandu wozviisa mumabhokisi.
Sei tichisarudza FBA LCL Negungwa?
Mumamiriro ezvinhu akajairika, isu tinosarudza gungwa LCL kuti ishandise kuendesa kana huwandu hwakatumirwa naanotakura ishoma pane yakazara mudziyo. Kurongedza, kurongedza, kuunganidza, kurongedza (kuburitsa) uye kuendesa nhumbi dzeLCL zvese zvakamiswa panzvimbo yemidziyo kana inland keshi yekuchinjisa chiteshi panzvimbo yemutakuri. LCL inguva yehukama yeFCL. Inoreva bhiri diki rezvinhu risingazadze makatoni akazara. Rudzi urwu rwezvinhu runowanzopatsanurwa nemutakuri uye mumudziyo wekutakura zvinhu kana mukati megungano chiteshi, uyezve matikiti maviri kana anopfuura matikiti maviri ezvigadzirwa zvakaunganidzwa mumudziyo, zvakafanana kuva muchinangwa chechiteshi chemidziyo yekutakura kana inland chiteshi kupatsanurwa kuendesa. Kune urwu rudzi rwezvinhu, mutakuri ndiye anoona nezve kurongedza nekuburitsa mashandiro, uye kurongedza nekuburitsa mutengo kuchiri kubhadhariswa kune anotakura. Mutakuri wemutakuri weLLC cargo zvakangofanana zvakafanana nezvechinyakare kutakura nhumbi.
Isu tichakuudza zvakadzama maitiro eLCL FBA kutumira
1. Mutengi anogadzira zvinhu, anonamira mukati nekunze chitaridzi.
2. Taura nesu kune imba yekuchengetera risiti uye kuendesa Shipment ID uye Referenzi ID kukambani.
3. Endesa zvinhu kudura rekambani iri kuChina (iro runyorwa rwezvigadzirwa zvinopihwa nemutengi mune yemagetsi vhezheni)
4. Kambani yakamira kuongorora, mushure meiyo mapallet, uye maratidziro ekunze (mutengi anoda kupa emagetsi label yemudziyo wekunze kukambani, kuitira kudzivirira izvo zvinhu zveLCL kuti zvisave nemakore).
5. Zvinhu mukati meimba yakasungwa, iyo yekuisa yekambani kurongedza, kubvumidzwa kwetsika uye kutumira kunze uye kutumira.
6.Midziyo kune inotarisirwa chiteshi, iyo kambani yekuisa tsika clearance.
7. Iyo kambani inobatsira vatengi kuverenga nguva yekuendesa yeFBA imba yekuchengetera.
8. Kuendeswa kuFBA imba yekuchengetera sezvakabvumiranwa.